LG W10, W30 na W30 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta | Androidsis
Izu ole na ole gara aga, enwere asịrị gbasara ụdị ekwentị LG ọhụrụ, a ga -ebido ya n'ahịa n'India. N'oge na -adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a tụrụ aro na bụ LG W10 ihe nlereanya mbụ na ika a ga -ebido na obodo a. Agbanyeghị n'ikpeazụ, oke a bụ nke gọọmentị ma enwere ekwentị atọ na ya. Ụlọ ọrụ Korea hapụrụ anyị LG W10, LG W30 na LG W30 Pro.
Modelsdị atọ na -ebupụta ezinụlọ ọhụrụ a nke ekwentị. Ha na-erute n'etiti etiti na ntinye, ebe ha kwere nkwa inye oke agha. LG W10, LG W30 na LG W30 Pro na -anọchitekwa anya mgbanwe dị mkpa maka ụlọ ọrụ. Ya mere a kpọrọ ha ka ha ruo ndị ọhụrụ.
Ụdị ha dị iche na ibe ha. Mgbe W10 na -eji ọkwa ọdịnala abịa, nke na -ewe nnukwu ohere na enyo gị, W30 na W30 Pro na -abịa na ọkwa dị ka mmiri mmiri, dị ka nke anyị hụrụ na nchapu nke mere ruo ugbu a na ụdị ụlọ ọrụ ọhụrụ a. .
1 Nkọwapụta LG W10
2 Nkọwapụta LG W30
3 Nkọwapụta LG W30 Pro
4 Ọnụahịa na mwepụta
Nkọwapụta LG W10
Nke mbụ n'ime ụdị bụ LG W10, onye aha ya agbapụtala, n'agbanyeghị na nkọwapụta ya dị iche na nke anyị mechara hụ na ihe nlereanya a. Ọnụ ya na W30 ọ bụ ya kacha dị nfe. Ngwaọrụ ọkara n'etiti etiti na ntinye, nke na-ekwe nkwa inye ndị ọrụ ezigbo arụmọrụ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,19 sentimita asatọ nwere mkpebi HD + nke pikselụ 1.515 × 720 yana nha 18.9: 9
Nchekwa n'ime: 32 GB (Enwere ike ịgbasa ya na MicroSD ruo 256GB)
Igwefoto n'azụ: 13 + 5 MP nwere Flash ọkụ
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9.0 achịcha
Njikọ: Dual 4G, WiFi 5, Bluetooth 4.2, GPS, MicroUSB 2.0, 3,5 mm Jack
Ndị ọzọ: Ihe nkwụnye akara mkpịsị aka azụ
Akụkụ: 156 x 76,2 x 8,5 mm
Arọ: gram 164
A na -egosi ya dị ka ihe nlereanya kachasị na mpaghara ahụ, n'agbanyeghị na ọ na -ezute ihe anyị nwere na oke a. Na mgbakwunye, anyị ga -echeta na ụdị ọhụrụ a nke LG na -ewetara anyị na -abịa na ọnụ ahịa dị ala n'ahịa. Yabụ na ọ masịrị ndị ọrụ n'ahịa.
Nkọwapụta LG W30
LG W30 na -ekerịta ọtụtụ nkọwapụta na LG W10, ebe ọ bụ na ha nwere otu processor na otu RAM na nchekwa. Ọ bụ ezie na imewe na nke a dị iche, nwere ọkwa n'ụdị dobe mmiri na -eme ka ọ dịtụ ọgbara ọhụrụ. Na mgbakwunye, oge a anyị na -ahụ igwefoto n'azụ ugboro atọ na ekwentị a. Ndị a bụ nkọwa ya zuru oke:
Ihuenyo: 6,26-inch IPS / LCD nwere mkpebi HD + nke pikselụ 1.515 × 720 yana nha 19: 9.
Igwefoto n'azụ: 12 + 12 + 3 MP nwere Flash ọkụ
Akụkụ: 162,7 x 78,8 x 8,5 mm
Igwefoto enweghị mgbagha bụ ihe kacha mkpa na LG W30 a. Akara Korea na -ahapụ anyị igwefoto n'azụ ugboro atọ, nke ga -enye anyị nnukwu arụmọrụ n'ụdị ọnọdụ niile. Na mgbakwunye, ịnwe batrị 4.000mAh (na -adịgide mgbe niile na oke a), nnwere onwe agaghị abụ nsogbu n'oge ọ bụla. Ihe mmetụta mkpịsị aka ahụ dịkwa na azụ ekwentị.
Nkọwapụta LG W30 Pro
Dị ka aha ya na -enye anyị ohere ịmata, LG W30 Pro bụ ihe nlereanya kachasị ike nke atọ nke ụlọ ọrụ ahụ nyefere. Ọ bụkwa naanị ya ga -eji processor Qualcomm na nke a. Dị ka LG W30, ọ na-abịa na ọkwa mmiri ozuzo ma nwee igwefoto atọ n'azụ. Ọ bụ ụdị dị ike karịa ụdị nke gara aga, ebe ọ bụ na ọtụtụ akụkụ ka bụ otu. Ndị a bụ nkọwa ya zuru oke:
Nchekwa n'ime: 64 GB (Enwere ike ịgbasa ya na MicroSD ruo 256GB)
Igwefoto n'azụ: 13 + 8 + 5 MP nwere Flash ọkụ
Batrị: 4.000 mAh na ụgwọ ngwa ngwa
Akụkụ: 157,7 x 75,9 x 8,3 mm
Ọtụtụ ihe jikọrọ nke gara aga, ma ọ bụ ya kacha ike. Nhazi dị mma, na mgbakwunye na inwe RAM dị elu na nke a, nke dị mkpa maka ndị ọrụ. Igwefoto okpukpu atọ ka dị, n'agbanyeghị na n'ọnọdụ a ọ na -eji ngwakọta dị iche karịa nke anyị nwere na W30. Batrị na -ejigide otu ụdị dị ka ụdị ndị ọzọ nọ na nso, naanị na nke a anyị na -ahụ chaja ngwa ngwa n'ime ya. Ma ọ bụghị, ọ naghị eweta mgbanwe.
Dị ka amaralarị n'ụbọchị ya, Ekwentị mkpanaaka W ndị a ga -ebido na India ugbu a. Anyị amaghị ma ọ ga -emesịa bụrụ naanị ebe ha na -aga, mana maka ugbu a, mba Eshia bụ naanị ahịa ebe enwere ike ịnụ ụtọ ha. A na -ewepụta ekwentị niile n'otu ụdị RAM na nchekwa.
Agba dị iche iche, n'agbanyeghị na ha niile ga -enwe agba dị iche iche. LG W10 na -abata odo odo na isi awọ, LG W30 na -acha anụnụ anụnụ, isi awọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ yana LG W30 Pro na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Yabụ ndị ọrụ ga -enwe ọtụtụ ihe ịhọrọ na nke a. Ọnụ ahịa ekwentị dị n'India mechara bụrụ nke gọọmentị, ha bụ ndị a:
LG W10 nwere nwere ọnụ ahịa rupees 8.999 ma ọ bụ euro 115 na mgbanwe
LG W30 Ọ ga -efu 9.999 rupees (ihe dị ka euro 127 iji gbanwee)
LG W30 Pro egosighi ego ọrịre ya
Ka ọ dị ugbu a, onweghị ụbọchị enyere maka mmalite ya na India.. Ọ ga -abụ n'oge adịghị anya, dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya siri kwuo, mana anyị enweghị nkọwa ruo ugbu a. Ya mere, anyị na -atụ anya ozi na nke a n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG W10, LG W30 na LG W30 Pro: ụdị ohuru a
Oliver na Benji ga-abịa na ngwaọrụ mkpanaka yana Tsubasa + n'ụdị Pokémon GO
Xiaomi kwadoro mkpebi nke igwefoto azụ na n'ihu igwefoto nke Xiaomi Mi CC9